apple iphone 12 pro max hupenyu hwebhatiri: zvese zvakanaka kunze kwechinhu chimwe chete ichi
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPhone 12 Pro Max hupenyu hwebhatiri: zvese zvakanaka kunze kwechinhu chimwe chete ichi
Apple iPhone 12 Pro Max hupenyu hwebhatiri: zvese zvakanaka kunze kwechinhu chimwe chete ichi
Pane zvikonzero zvikuru zviviri nei ungade iyo iPhone 12 Pro Max pamusoro peimwe iPhones nyowani: iyo hombe kuratidzira uye bhatiri rakakura.
Uye zvirokwazvo, iyo iPhone 12 Pro Max yakagadzirirwa 3,687 mAh bhatiri sero mukati, chikuru pane ese maPhones matsva. Muchokwadi, heino maitiro eiyo iPhone 12 Max bhatiri saizi inofananidzwa nehukuru hwebhatiri pane mamwe maPhones mumhuri:
iPhone 12 Mini bhatiri kugona: 2227 mAh
iPhone 12/12 Pro bhatiri kugona: 2815 mAh
iPhone 12 Pro Max bhatiri kugona: 3687 mAh
Iri bhatiri rakakura kudaro (reiyo iPhone zviyero) rinofanirwa kukonzeresa kune chaiwo-epasirese hupenyu bhatiri mhedzisiro, asi hapana nzira yekuziva izvi pasina kuyedzwa. Uye kuyedza isu takazviita! Takamhanya bhuru-rakadzika bhatiri bvunzo kuti unzwisise chaizvo zvaunogona kutarisira kuPro Max nebhatiri rayo rakakura.
Verenga zvakare zvedu zvakadzama iPhone 12 Pro Max ongororo pano Apple iPhone 12 Pro Max $ 109999 Tenga paGoodBuy $ 109999 Tenga kuChivavarira $ 1099 Tenga kuApple $ 109999 Tenga kuVerizon * Psst, mitengo yakadzikiswa ichave iripo sechikamu cheiri kuuya Prime Day inobata , saka chengeta izvo mupfungwa.
iPhone 12 Pro Max: YouTube Vhidhiyo Kutenderera Bhatiri Bvunzo
zita maawa Yakakwirira iri nani
Apple iPhone XS Max 5h 25 min
Samsung Galaxy Cherechedza 20 Ultra 7h
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 10h 29 min
OnePlus 8T 8h 48 min
Kuona mavhidhiyo kuYouTube inguva yekunakidzwa nevazhinji, uye YouTube inogona kutsiva TV yevamwe vanhu, saka bvunzo iyi chiratidzo chakanakisa nezve hupenyu hwebhatiri iwe hwaunogona kutarisira kubva kune nyowani iPhone 12 Pro Max muhupenyu chaihwo.
Saka zvinogara kwenguva yakareba sei? Iyo 12 Pro Max yakarova maawa masere nemaminetsi makumi matatu nemanomwe pane yedu YouTube vhidhiyo yekushambadzira bhatiri bvunzo, ingori shoma pasi pegore rapfuura & apos; s iPhone 11 Pro Max, iyo yakarova maawa masere nemaminetsi makumi mashanu nemasere pamuedzo mumwe chete. Uye izvo chaizvo hazvishamise, mushure mezvose, iyo nyowani 12 Pro Max inoitika kuve ine diki bhatiri sero pane yakatangira iyo.
iPhones pachinyakare hadzisi vatambi vakanaka kwazvo pamuedzo uyu, asi munguva pfupi yapfuura mamwe mafoni eApple akarasa pasi. Semuenzaniso, Chiziviso 20 Ultra chakaita zvisina kunaka musiyano pamuyedzo uyu, uchingoona maawa manomwe chete, pasi peiyo iPhone 12 Pro Max. Iyo yekutanga S20 Ultra modhi, zvisinei, yaive neiyo iPhone yakarova nezvibodzwa zvemaawa gumi nemaminitsi makumi maviri nemaviri. Don & apos; usakanganwe kuti iwe unogona zvakare kuwedzera yako yaunofarira foni kune ino chati uye uone maitirwo ayo pane iyi bvunzo, mikana yakakwira kuti isu takaiyedza iyo!
iPhone 12 Pro Max: Webhu Kutsvaga Webhu Bvunzo
Apple iPhone XS Max 8h 33 min
Apple iPhone 12 Pro 12h 35 min
Samsung Galaxy Cherechedza 20 Ultra 11h 57 min
OnePlus 8T 10h 54 min
Kunyangwe bhatiri-diki bhatiri richienzaniswa negore rapera & apos; s iPhone 11 Pro Max, iyo nyowani 12 Pro Max yakakwanisa kuipfuura neiyo diki, asi kwete isingakoshi margin. Iyo nyowani 12 Pro Max yakagara inonakidza maawa gumi nemana nemaminetsi matanhatu pane yedu yewebhu kubhurawuza bvunzo. Uyu muedzo ndiwo wakareruka kwazvo watinomhanya nawo uye maaposheni anomiririra ekuti foni yako ichabata sei kungoita zvezuva nezuva mabasa sekubhurawuza webhu uye kupuruzira.
Sezvineiwo, kunyangwe mafoni mazhinji eApple aine mabhatiri akakurisa (iyo S20 Ultra inoratidzira 5,000mAh cell), iyo iPhone 12 Pro Max yakanyatsogadzirirwa mhando iyi yekushandisa uye inogara kwenguva refu kupfuura ese iawo. Saka kana iwe ukaverenga zvakawanda pawebhu uye uchiita zvakanyanya kureruka basa, iyo 12 Pro Max inokufadza zviri nyore nekureba kwayo.
iPhone 12 Pro Max: 3D Kubheta Bhatiri Bvunzo
Samsung Galaxy Cherechedza 20 Ultra 7h 17 min
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 9h 12 min
Kana iwe & apos; verenga yedu iPhone 12 uye iPhone 12 Pro bhatiri bvunzo , pamwe neyedu iPhone 12 Mini bhatiri bvunzo , unotoziva kuti maPhones ekupedzisira akakundikana mabhenji ebheteri e3D zvinoshamisa, saka hazvizokushamisa kuti iwe uzive kuti iyo iPhone 12 Pro Max yakaita zvakashata semamwe mafoni. Foni yakatanga kudziya isina kufanana nechero imwe foni yatakayedza uye bhatiri rainyungudika nekukasira kunge pistachio ice cream muzhizha kupisa. Ehe, iyo Pro Max inotora yakareba yakareba kupfuura mamwe matatu maPhones matsva nekuda kwekuti ine bhatiri hombe, asi zvibodzwa zvacho zvakaderera zvisina kujairika.
Sezvingatarisirwa, isu taifanira kuongorora! Takasvika kune yedu yepamusoro gamba cape uye mitambo yemitambo, yaive nguva yemutambo! Takatanga kutamba mitambo yakasiyana siyana uye takaona nyaya imwe chete ichidzokororwa mune mimwe mitambo. Semuenzaniso, Minecraft yainyungudutsa bhatiri, nepo mimwe mitambo yaitaridzika kunge isina kubatika nazvo. Iyo inozivikanwa Call of Duty Mobile yakamhanya zvakanaka chete pasina foni kudziya uye nebhatiri rinodhonzera kune rwiyo rweanosvika gumi neshanu muzana paawa. Izvo zvine musoro zvakanyanya, uye zvaizopa iyo iPhone 12 Pro Max ye3D yemitambo bhatiri hupenyu hweanopfuura maawa matanhatu.
Nekudaro, kuferefeta kwakakwana: zvinoita kunge mimwe mitambo haina kukwidziridzwa yeApp-A14 chip ine simba rese mukati uye inomhanya musango uye mahara, isingaise chero makapeti pachip uye inodurura bhatiri nekukurumidza zvisingaite. Neraki, izvi hazvibate mitambo yese.
Kana usiri mutambi, mikana ndeyekuti iwe unozofadzwa nehupenyu hwebhatiri pane iyo 12 Pro Max. Uye kana uriko, iwe unenge uchiri wakanaka kutoti ukagumburwa pane imwe yeayo mitambo inonetsa iyo inodurura bhatiri zvisina kujairika.
Ndeapi mafungiro ako neiyo iPhone 12 Pro Max? Inotora nguva yakareba sei bhatiri rayo?
Vamwe vashandisi veT-Mobile vanowana yavo voicemail yakanyorwa paGoogle & apos; s Runhare rwekushandisa
Heano maitiro ekunyora vhidhiyo vhidhiyo paApple's iPhone 6, iPhone 6 Plus uye iPad Air 2
Maitiro ekuisa Python 3 paMac OS X
T-Mobile & apos; s itsva Unlimited Taura uye Chinyorwa chinyorwa chinouya pasina dhata uye chinodhura $ 25 pamwedzi
AT & T Modio inopa 4G LTE kubatanidza kune mamwe maWi-Fi chete Apple iPad mhando